Zvese zvaunoda Kuti Uzive Nezve iyo Border Collie-Lab Sanganisa - Inobereka
Zvese zvaunoda Kuti Uzive Nezve iyo Border Collie-Lab Sanganisa
Mbeu dzakauchikwa imbwa dzinowanzo sanganisa hunhu hwakanaka hwevabereki kuti dzigadzire imwe inoshamisa ina-makumbo shamwari.
Boradors hazvina kusiyana nekuti imbwa idzi ndidzo shasha dzinodiwa yenyika ye canine. Ivo vane shungu yekufadza vanhu vavo, kunyangwe zviri zvakaoma kuenzanisa simba ravo .
Ramba uchiverenga kuti uone kana iwe uri kukwira kune iro dambudziko!
Imhandoi imbwa iri Borador?
Chii chinonzi Border Collie-Lab musanganiswa inoita senge?
Iyo Border Collie Lab inosanganisa imbwa yemhuri yakanaka?
Kuchengeta Border Collie-Lab musanganiswa
Iyo Border Collie & Lab inosangana ine hutano?
Kutenga yako wega Borador puppy
Mamwe maLabrador anosanganiswa uye Border musanganiswa
Wakagadzirira Borador yako wega here?
Iyo Border Collie-Lab muchinjikwa ndiyo kupenya, hyper kusanganisa ye - iwe wakazvifungidzira - iyo Border Collie uye iyo Labrador Retriever.
Sezvo nezve chero chero chero rwakavhenganiswa rudzi, iyo Borador ingangove yaive iriko kwechinguva. Asi yakatanga kuzivikanwa seyakasiyana, ine hungwaru yakasanganiswa imwe nguva mukati memakore gumi kusvika makumi maviri apfuura.
With kuvhima nekufudza vabereki , njere uye simba reBorder Collie-Lab zvinonakidza. Kuti tinzwisise kuti aya mabara akasvibisa sei vana vavo, tinofanirwa kutarisa yega yega.
Anoshinga Border Collie
Iwo eScotland makwai-kufudza Border Collie inoonekwa se yakangwara imbwa dzinza munyika. Zvinoenderana neAmerican Psychological Association, imbwa idzi dzine kugona kwepfungwa kwemwana ane makore maviri ekuberekwa .
Naivowo zvine simba zvinoshamisa ! Iwe wakambovaona ivo mukukwikwidzana uye makwikwi ekuteerera, uko kwavo kushanda kwehunhu uye zvemitambo zvinogona kupenya chaizvo. Ivo zvakare vane mukurumbira pasikirini hombe senge Nana kubva mufirimu Snow Imbwa , naizvozvowo Fly naRex mumhuri firimu Bhabha .
Haasi ese maswiti uye maruva ane maBorder, zvakadaro. Kana hunhu hwavo hwekufudza uye hukuru-huchenjeri husina kuiswa mushandisirwo wakanaka, imbwa idzi dzinogona kuve dzinoparadza. Ivo yakanangana nebasa uye kubudirira nekushanda.
Inodikanwa Labrador Retrievers
Labs , sekuzivikanwa kuri kuita pooches aya, anga ari a sarudzo yepamusoro pakati pevanoda imbwa muU.S. kwemakore anoda kusvika zana. Muchokwadi, ivo vakave pamusoro peiyo AKC kunyoresa runyorwa gore rega kubva 1991.
Chii chinoita kuti Labrador Retrievers ive yakakurumbira ndeyavo hushamwari uye kuita zvinhu zvakasiyana-siyana . Vanogadzira imbwa huru dzemhuri , asi ivowo vashandi vakavimbika.
Chinangwa chepakutanga cheLab chaive chekubatsira varedzi kutora mambure avo uye kubata hove dziri kupukunyuka. Ivo vachiri inoshandiswa pakuvhima nekudzosa nhasi, asi ivowo sarudzo dzakavimbika dzebasa rebasa uye mamwe mabasa ane njodzi, sekubhomba-kunhuwa.
Imwe neimwe Borador ichataridzika zvakasiyana kubva kune inotevera, asi ivo vanogovana mashoma maitiro. Pakati pese, iwe unozogona kuona iko kukanganisa kwezvese zviri zviviri zvibereko zvevabereki muBorder yako Lab.
Mavara avo emapatani anowanzo fanika neaya eBorder Collie, nepo ivo vakavakwa zvakanyanya seLabrador yechidiki. Vane rakasimba Lab musoro uye muswe wekudzora, uine mutete Border mhino . Nzeve dzinofuratirwa dzeBorador uye maziso echokoreti anopedzisa pasuru.
Vakakura sei maBoradors?
Ndakamira paavhareji ye 15 kusvika ku20 inches kureba (38 kusvika 51 cm) uye kuyerwa 35 kusvika ku65 mapaundi (16 kusvika 29 kg), maBoradors vanoonekwa se pakati nepakati kubereka kana wakura zvakakwana.
Vakadzi Boradors kazhinji idiki diki pane varume, asi imbwa yako inogona kuwira mukati mematanho aya, zvisinei nemurume.
Kungoita kuti maBorder Labs hadzisi imbwa hombe hazvireve kuti dzakakodzerwa nekugara mufurati. Nekuda kwenzvimbo yavo yekurovedza uye zvavanoda, idzi vana ichaita zvakanyanya mumba ine nzvimbo yekumhanya , kunge purazi kana purazi.
Jasi reBorador & ruvara
Mazhinji Border Retrievers ane nhema uye chena mamaki kumeso kwavo uye pachipfuva, kungofanana neBorder Collie. Huwandu hwerudzi chena hunosiyana, hazvo. Vamwe veBoradors vanogona kuve vangangoita nhema dema, nepo vamwe vaine machena machena.
Havasi vese vachatamba jasi-uye-chena jasi combo. Border Collie Lab michinjikwa inogona kuva chero mumvuri kana musanganiswa wevatema, yero, shava, tan, tsvuku, kana merle.
Tinofanira kugovera a shoko renyevero nezve-merle-mavara Border Labs: ivo dzimwe nguva vanogona kuve nematambudziko ehutano nekuda kwekuita kushaya hanya maitiro. Kunyangwe imbwa iine chena musoro, maziso ebhuruu, uye jasi merle inogona kuva yakanaka, ivo vari zvese zvine chekuita nekuberekwa matsi .
Chero vhudzi ravo rakaita sei, wako Borador anogona kunge aine rakatsetseka, rakapenya bhachi . Huru yavo inogona kupfupika kusvika pakati nepakati pakureba, zvinoenderana nezvavanowana kubva kuvabereki vavo.
Uku kuyambuka's jasi mbiri inobatsira kubata nekupisa kwakanyanya, asi zvakare zvinoreva kuti unogona tarisira huwandu hwakaenzana hwekuteurwa gore rese. (Yakareba kudaro, yakachena fenicha.) Pasina kutaura, imbwa idzi dziri kwete hypoallergenic .
Boradors vari vakazvipira uye vanoda kufadza nhengo dzemhuri yavo. Izvo hazvireve hazvo kuti ivo vanokodzera chero mhuri, zvakadaro.
Collie Labs ari imbwa dzinotaura zvine zvakawanda zvekutaura . Yako Borador haizove yappy, asi ivo vanozokunyevera nezve ingangoitika njodzi - kusanganisira kana yagara yakareba kubva dumbu ravo rekupedzisira.
Uku kuyambuka kazhinji kunowirirana nevana uye nezvimwe zvipfuyo. Majini avo eLab anonamira kubva kudivi ravo reBorder Collie, saka vanozonakidzwa nekutamba pamwe neparutivi rwasara. Tarisa vhidhiyo inoyevedza yemwana weBorador anonakidzwa neromp newaanotamba naye!
Pane mukana wekuti wako Borador anogona kunge aine tsika yekufudza . Unogona kuzviona zvichinakidza uye zvichitobatsira, asi vana vangangodaro vasinganakirwe nazvo zvakanyanya. Iyo inogara iri zano rakanaka kutarisa shamwari yako ye canine pese pavanenge vakatenderedza tudiki nezvimwe zvipfuyo, kungo chengeteka.
Kutaura nezvemhuka dzinovaraidza, chenjera kwazvo kuunza yako Border Lab kutenderedza katsi . Ivo vanofanirwa kuita zvakanaka nedzimwe imbwa pavanoshamwaridzana nekukurumidza, asi inononoka, kudzikamisa sumo uye manejimendi inzira dzakanaka dzekuchengetedza runyararo.
Pakazara, Boradors vari imbwa dzine rudo, dzine rudo avo vanoda kuve nemhuri dzavo zvakanyanya sezvinobvira. Hazvina kukodzera vanhu vari kure nemusha kwenguva yakareba se Kuparadzanisa kunetseka uye hunhu hunoparadza hunogona kutanga.
Kurovedza: Boradors vakangwara here?
Border Collie-Lab inosanganiswa vanhu vakakomba-vanofadza uye vanoshanda zvakanyanya. Dudziro: kurovedza kuri nyore-mhepo - kwechikamu chikuru. Pese pano neapo, imbwa dzakangwara senge idzi dzinofunga kuti dzinonyatsoziva. Usashamisika kana yako Borador ichiratidza kuva chakasimba-chishuwo .
Ratidza imbwa yako kubva pakutanga maitiro aunotarisira kuti vazvibate. Maviri anogona kuita matambudziko maitiro ekutarisisa panguva yehudiki ari kutsenga zvisina kufanira uye kudzingirira .
Paunenge iwe wawana tsika kubva munzira, iwe unogona kunakidzwa kudzidzisa yako Border Lab mashoma manomano. Tarisa vhidhiyo inoyevedza yemwana weBorador wekufemerwa!
Usafunge kurovedzwa kungori kwechidanho, kana. Yako Borador ichaita rudo kudzidza nzira nyowani dzekuratidzira kwavo kungwara uye kuita kuti vanhu vafare. Ndiani anoti haugone kudzidzisa imbwa yekare zvinyowani zvitsva? Iyo Labrador-Border Collie hybrid haina kumbowana memo iyoyo.
Imbwa dzese dzakasiyana, asi kune mashoma mashoma mabasa anouya neese ega.
Yako Borador inogona kunge iri yakaderera yekuchengetedza maererano nekudya, asi kutarisira jazi rezvizvarwa izvi kunogona kuve kuri kuita kune vamwe varidzi. Kana zvasvika pakuvabatsira kushanda kubvisa zoomies, zvakadaro, iwe une rako basa rakatemwa iwe.
Kushongedza Border Retriever yako
Nekuda kwehurefu hwejasi ravo, maBoradors havadi kutariswa kwakanyanya mudhipatimendi rekushambidzika.
Kutsvaga kwavo fur mavhiki mashoma ega ega inogona kubatsira kubvisa yakasununguka, bvudzi rakafa uye kudzikisa kudurura. Bristle kana pini mabhurashi isarudzo yakanaka.
Kunyangwe zvodii, USAVEBURA yako Borador! Izvi zvinogona kukanganisa jasi ravo uye zvinofanirwa kuitirwa chete zvikonzero zvekurapa , kunge imbwa yako inoda kuvhiyiwa. Kana iwe uine hanya nemvere dzechipfuwo, funga zvakare rudzi urwu.
Shamwari yako canine inofanirwa kugeza kamwe chete pamwedzi kana pazvinenge zvichidiwa. Uye usakanganwa kutarisa nzeve dzavo, chenesa yavo mazino vhiki nevhiki, uye clip yavo nzara sezvazvinodiwa.
Yakawanda sei kurovedza muviri inoda Boradors?
Couch mbatatisi uye Netflix binge-vatariri, iyi haisi iyo imbwa yako. Idzi imbwa dzinoda a mashoma emaawa maviri pazuva yakazvipira kurovedza muviri.
Kana iwe uine mhuri hombe, kugovana basa rekudzidzira yako Borador izano rakanaka. Iwe une chokwadi chekusakara kwenguva refu vasati vadaro!
Shandisa matoyi epuzzle kana mitambo yehuropi kuvachengeta vakabatikana uye kukurudzira kwepfungwa. Izvi hazvifanirwe kunge zvakaoma kana kudhura. Viga zvekudya zvakapusa mumba kana mune rimwe ramaoko ako, uye tarisa imbwa yako ichishandisa sniffer yavo kuwana izvo zvinhu.
Iwe zvakare uchada kushandura kumusoro kwavo kurovedza muviri nguva nenguva kuti zviwedzere kukurudzira. Edza mapaki matsva, enda kunokwira, kana kuenda kunoshambira (Boradors vanoda mvura!). Tsvaga kosi yekumhanyisa munzvimbo yako, uye tarisa mwana wako achienda kuguta!
Tarisa uone kuti muridzi weBorador uyu anosanganisa kudzidziswa nemutambo wekutora. Ichi chi hukuru nzira yekushanda muviri wepup yako nehuropi!
Ngwarira nekutamba-leash kutamba . Pakati pehukama hweLabrador neBorder Collie yekufudza mota, iyo Borador ine muyedzo unogara uripo wekutiza wega panjodzi yavo.
Kudya: Boradors anofanira kudya zvakadii?
Huwandu hwechikafu chaunofanirwa kufudza fido yako hunofanirwa kunge hwakavakirwa pazvinhu zvakaita saizi yake, zera, danho rekuita, uye hutano. Munhu mukuru Labraborder anofanira kudya nezve 1 ½ kusvika 2 makapu chekudya pazuva, chakakamurwa kuita miviri kudya. Vechidiki maBrador vanoda zvidiki zvidiki, kazhinji.
Nekutenda, vabereki vakaputsika ava havawanzo kutambura neakawanda chikafu chekudya. Nekuda kwesimba ravo, protein-yakafuma yakaoma imbwa chikafu iri sarudzo yakanakisa yeiyo yakasanganiswa.
MaLab anonakidzwa chaizvo nechikafu uye anowanzo nyanyisa kudya. Kana iwe ukaona yako Collie Lab ichitanga kurongedza pamapondo, iwe unofanirwa kudzora kudya kwavo kwekudya kana kukwirisa chikamu chezviitiko kudzivirira kufutisa.
Boradors havana zvakawanda zvingangofungidzirwa kurwara kana chirwere, asi panogara paine njodzi. Kunyanya izvo zvirwere izvo inogona kugara nhaka iyi pooch kubva kune ayo evabereki marudzi.
Chenjerera bloat kana mwana wako achidya zvinokurumidza. Edza ndiro yekunonoka-yekudyira uye kurudzira yako mbwanana kuzorora kwechinguva mushure mekudya.
Vakuru Vakuru vanogona kunge vari panjodzi huru yeku matambudziko akabatana , dzakadai seArthritis uye hudyu dysplasia .
Purebred Border Collies ine mukana wepamusoro wekufa pfuti uye kuberekwa kusanzwa, saka pane mukana wekuti iwe uone mamiriro aya muBorador yako. Mamiriro eganda uye matambudziko ekuona, saCollie Eye Anomaly (CEA) uye cataract inogona kukura, zvakare.
Kunyangwe nezvirwere izvi, Border Collie-Lab michinjikwa inorarama kwenguva yakareba, ichizvirova pakati hupenyu hwemakore gumi kusvika gumi nemashanu .
Nevabereki vayo vaviri vari kuve vakakurumbira, hazvishamise kuti iyo Border Retriever iri kudiwa, futi. Chii chinotonyanya nani ndechekuti iyi musanganiswa inodhura kupfuura mamwe mazambuko. Paavhareji, mwana weBorador anogona kudhura nezve $ 200 kusvika $ 500 .
Haisi chokwadi kana mubereki kana kununura kwakakukodzera? Izvo zvese zvinoenderana nebhajeti rako uye zvaunofarira.
Iwe unoda kubhadhara zvakanyanya kana zvichireva kuziva zvese nezve nhoroondo yemwana wako? Enda nemufudzi. Kana iwe usina hanya nechakavanzika chidiki (kana pamwe iwe uchida kudzivirira padanho rembwanana zvachose), kununura Borador kunogona kuve kwakakukodzera.
Nhau dzakanaka ndedzekuti, chero nzira yaunofunga kuenda nayo, kutsvaga Labrador-Border Collie muchinjikwa kuti ubatanidze iyo pack haifanire kunge yakanyanya kuoma zvachose.
Borador vafudzi & kennels
Une zvakawanda zvekusarudza kana zvasvika pakutsvaga Border Collie-Lab musanganiswa uri kutengeswa, saka ita tsvagiridzo yako. Usanzwe zvakaipa nezvekusarudza, chero.
Zvirinani, mubereki akavimbika anofanira kukwanisa ipa zvitupa zvehutano uye zvinyorwa zvekurapa kune imbwa yega yega yemubereki. Ivo vanofanirwa zvakare kurega iwe uchivashanyira, kusangana nevabereki, uye nekuona yavo yazvino marara.
Kana iwe uchitsvaga Collie Lab ine chaiyo hunhu kana chitarisiko, udza vafudzi kumberi. Kunyanya kutungamira iwe uri, iwe unowedzera mukana wekuti uwane mwana akakwana iwe.
Chero zvaunoita, usamhanye mukutenga. Imbwa haisi hembe inogona kudzoserwa kana isina kukodzera chaizvo. Tora nguva yako, uye nyatsoita.
Iko hakuna chaiwo makennels nemasangano ane anowanikwa Borador vana. Zvakadaro, iwe unogona kutarisa pamisika senge Greenfield Puppies , Lancaster Puppies , uye Keystone Puppies kutanga kutsvaga kwako.
Kana iwe ukasarudza kutora Borador, tarisa kwakatenderedza dzimba dzekugara kana kuyedza kutsvaga kununurwa kwakanangana nerudzi padyo newe.
Sangano rekununura rinogona kuve rakakumikidzwa kumaLab kana Border Collies, asi ivo zvakare vachatora mumisanganiswa yerudzi rumwe nerumwe. Kana vasina Border Lab, vanogona kuziva nezve nzvimbo inoita.
Aya masangano ekudzikinura inzvimbo huru yekutanga kutsvaga kwako:
Mid-Atlantic Border Collie Kununura
Huya Bye Border Collie Kununura
Midwest Border Collie Kununura
Lucky Lab Kununura
Brookline Labrador Retriever Kununura, Inc.
Kufungisisa kana iwe uchigona kuenderera pamwe neiyo Borador's simba nhanho? Pane zvakawanda zvekuda nezve ichi chakayambuka, asi, zvinonzwisisika, rumwe rudzi haruwanzokurudzirwa kumunhu wese .
Kana iwe uri paruzhowa, tarisa aya mamwe maLabrador Retriever anoyambuka uye Border Collie musanganiswa kubatsira kuita kuti sarudzo ive nyore.
Goldador (Goridhe Retriever uye Labrador Retriever musanganiswa)
Labradoodle (Labrador Retriever uye Poodle musanganiswa)
Sheprador (ChiGerman Mufudzi naLabrador Retriever musanganiswa)
Beagador (Beagle uye Labrador Retriever musanganiswa)
Shollie (Mufudzi wechiGerman neBorder Collie musanganiswa)
Pakati peiyo Border Collie's Type A basa hunhu uye Labrador's Type B maitiro, Boradors vari musanganiswa unonakidza wekuzvipira uye kutamba .
Border Collie-Lab musanganiswa uchaenda mabhanana asina kujairika epanyama uye epfungwa chiitiko, saka ivo vari yakanyatsokodzera varidzi vemitambo nenguva nesimba rekutsva. Zvichavawo nani kwavari kuve nenzvimbo yakawanda yakachengetedzeka yekumhanya vega.
Saka iwe unofungei? Unogona here kuenderera pamwe nesimba Border Collie-Lab musanganiswa? Tiudzei mune zvakataurwa!
imbwa harness sei kupfeka
Pomeranian uye husky mix imbwa
australian shepherd uye blue heeler
german shepherd melanistic dema uye tani
imbwa yangu ichave yakakura zvakadii